सुगर, वजन नियन्त्रण गर्ने, सबै रोगसँग लड्ने शक्ति बढाउने, खानुहोस् यो खाद्यबस्तु ! जानी राखौ « Onlinetvnepal.com
सुगर, वजन नियन्त्रण गर्ने, सबै रोगसँग लड्ने शक्ति बढाउने, खानुहोस् यो खाद्यबस्तु ! जानी राखौ
Published : 23 April, 2019 9:20 pm
ठण्डी मौसम शुरु भएको छ । यो समय ख्याल गरेन भने शरिरमा नकारात्मक असर पर्दछ । गलत असरबाट बच्ने हो भने आज हामी तपाईका लागि अति उपयुक्त कुराको जानकारी दिँदैछौ । बदाम हाम्रो देशमापनि सजिलै पाईने खाद्य बस्तु हो । यो खनिजको स्रोत हो । यसमा प्रोटिन प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । जाडोयाममा धेरैले बदाम खान रुचाउँछन् । दैनिक रूपमा बदाम सेवन गर्नु स्वास्थ्यका लागि एकदमै लाभदायी हुन्छ ।
बदाममा उच्च मात्रामा चिल्लो पदार्थ हुने भए पनि यो प्रोटिन तथा फाइबरको राम्रो स्रोत हो, जसमा शरीरका लागि आवश्यक खनिज तत्व भरिपूर्ण हुन्छ । त्यसैगरी ओखर, पिकानलगायतका अन्य बदामले क्यान्सर रोगविरुद्ध लड्ने एन्टिअक्सिडेन्टको काम गर्छ ।
रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउँछ : नियमित बदाम खाँदा मुटुसम्बन्धी समस्याबाट बच्न सकिन्छ । बदाम खाने व्यक्तिमा डिप्रेसनको समस्या एकदम न्यून हुन्छ । यस्तै, बदाममा पाइने फाइलोस्टेरोल नामक तत्वले ट्युमरलाई नियन्त्रण गर्नुका साथै क्यान्सर हुनबाट जोगाउँछ । हप्तामा दुईपटक बदाम खाने महिलामा ५८ प्रतिशत र पुरुषमा २७ प्रतिशत कोलोन क्यान्सरको खतरा कम हुन्छ ।
भिटामिन सी : बदामको दैनिक सेवनले रुघाखोकीको जोखिम कम रहन्छ । यसका साथै भिटामिन सीका कारण घाँटीमा हुने खसखस र सुक्खा हुनबाट बचाउँछ ।
तौल नियन्त्रण : बदाम खाँदा पेट डुम्म हुने भएकाले अन्य क्यालोरीयुक्त खानेकुरा खान मन लाग्दैन । खानामा कमी आउनासाथ मोटोपना नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
डायबिटिजबाट जोगाउँछ : म्याग्नेसियमका कारण बदाम शरीरमा उचित मात्रामा ब्लडसुगर तह कायम राख्न फाइदाजनक मानिन्छ, जसले डायबिटिजको समस्याबाट जोगाउँछ ।
छालामा चमक ल्याउँछ : बदाममा हुने मोनोस्याचुरेटेड फ्याट र रिजैभेट्रोल तत्वले छालालाई चम्किलो बनाउँछ । यस्तै, पोषणयुक्त फाइबरले छालामा हुने अत्यधिक तेललाई फ्रलस गरी नरम र चम्किलो बनाउँछ ।
प्रजनन क्षमता बढाउँछ : बदाममा प्रशस्त मात्रामा फोलिक एसिड रहेको हुन्छ । यसले महिलामा प्रजनन क्षमता बढाउँछ । यसका साथै गर्भमा रहेको शिशुको विकासमा पनि ठूलो भूमिका खेल्छ ।
प्रहरीको गाडी तोडफोड, अश्रुग्यास प्रहार | रमेश प्रसाई सँगै समर्थक…..(भिडियो सहित)
रबि लामिछानेका समर्थक बि*रुद्द चितवनमा युवा परिचालन गरिएको छ । हिजो देखिने रबिका समर्थक चितवनमा
२ करोड संगै रबि सिध्याउने खतरनाक खेलको भयो पर्दाफास,सर्बोच्च अदालतका वकिलले गरे डरलाग्दो खुलासा (भिडियो)
धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, अहिलेका चितवनका SP दानबहादुर मल्ल प्रचण्डका पुर्व बडीगार्ड हुन् । त्यतिबेला
रमेश प्रसाईको रगत उमाल्ने ठाडो चेतावनी ! रमेश प्रसाई चितवन पुगेर गर्जिए …..(भिडियो सहित) सबैले शेयर गरौं
पत्रकार रवि लामिछानेका समर्थक र प्रहरीविच दोहोरो झडप हुँदा डेढ दर्जनबढी घाईते भएका छन ।
दिपक बोहोराले गरे डर लाग्दो खुलासा : रबि लामिछानेलाई अपहरण शैलीमा लगियो…. (भिडियो सहित)
प्रहरीले टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछानेसहित तीन जनालाई आज पक्राउ गरेको छ ।नुवाकोटका पत्रकार शालिकराम
प्रहरीको गाडी तोडफोड, अश्रुग्यास प्रहार | रमेश प्रसाई सँगै
२ करोड संगै रबि सिध्याउने खतरनाक खेलको भयो पर्दाफास,सर्बोच्च
रमेश प्रसाईको रगत उमाल्ने ठाडो चेतावनी ! रमेश प्रसाई
दिपक बोहोराले गरे डर लाग्दो खुलासा : रबि लामिछानेलाई